Misoro yeNhau dzaNhasi, Chishanu, Nyamavhuvhu 28, 2020
Sangano reCommunity Working Group on Health ropa dzidziso pamusoro peCovid-19 kune vanoita zvehutano mumadhorobha nemumaruwa.
Mutungamiri weMDC Alliance, VaNelson Chamisa, vanoshoropodza vanhu vanoita zvemhirizhonga mubato ravo apo vanga vachiviga nhengo yebato ravo, Va Patson Dzamara, avo varadzikwa kumusha kwavo kwaMutoko.
Vamiriri vedzimwe nyika muZimbabwe vanoburitsa pachena kushushikana kwavo nekusamira zvakanaka kwezvinhu muZimbabwe uye vari kukurudzira kuti hurumende irwise huori zvikuru munyaya dzezvicherwa.
Zvizvarwa zveZimbabwe zvotaura pamusoro pekutambira zviri pamutemo kudomwa kwakaitwa VaDonald Trump neRepublican National Convention kuitira kuti vamirire bato ravo musarudzo yemutungamiri weAmerica muna Mbudzi.
Makanzuru emumaguta anoramba kutambira zvakomekedzwa nehurumende zvekuti vanoona nezvekufambiswa mabasa mumatunhu akasiyana siyana kuti vange vachipinda mumisangano yemakanzuru, asi makanzuru emumaguta achiti izvi hazvisi pamutemo.
Mutambi wemuZimbabwe ane mukurumbira, Tino Kadewere, ari kutarisirwa kupinda munhandare manheru anhas apo chikwata chake chiri kukweshana neDijon
Muchirongwa cheLiveTalk na8pm tiri kutarisa matambudziko akatarisana nenyika.